यसरी मनाए सेलेब्रेटीहरूले तीज :: Setopati
अभिनेत्री केकी अधिकारीले तीजको शुभकामना दिँदै शुक्रबार बिहान एउटा ट्विट गरिन्- 'यसपटक यस्तै भयो, अर्कोपटक घरबाट पनि अनि आफ्नो डरबाट पनि खुलेर निस्किन सकौं। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राखौं। सुरक्षित रहौं। सचेत रहौं। तीजको शुभकामना!'
यसपटक वास्तवमै तीजको अनुभव सबैलाई नौलो रह्यो। हरेक वर्ष तीजमा शिवको पूजाअर्चना, व्रत र गाउँटोलका दिदी-बहिनी एकैठाउँ भेला भएर नाचगान गरिन्थ्यो। यसपटक भने पशुपतिनाथ सुनसान छ। टोल छिमेकको रौनक सेलाएको छ।
कोरोना लकडाउनका कारण घरमै देवता भाक्नुपर्यो। नाचगान परिवारभित्रै सीमित भइदियो।
अभिनेत्री केकीले यसै भनेकी होइनन्, 'यसपालिको तीज ऐतिहासिक तीज बनेको छ। यो पुस्ताका लागि जीवनभरको यादमय तीज बनेको छ।'
यति हुँदाहुँदै उनी सकारात्मक सुनिन्छिन्, 'जो जो छौं, रमाइलो गरिरहेका छौं। नाचगान डर र पीडा भगाउने बहाना बनेको छ।'
केकी नौ वर्षदेखि तीजको व्रत बस्दै आएकी छन्। सुरूमा फुपू, दिदीहरूले व्रत बसेको देख्दा रहरले सुरू गरेकी थिइन्। पछि स्वास्थ हिसाबमा पनि राम्रो हुने बुझेपछि निरन्तरता दिइरहेकी छन्।
व्रत बस्दा मनमा शान्ति मिल्ने उनको अनुभव छ। उनी फलफूल भने खाने गरेको बताउँछिन्।
अभिनेत्री आँचल शर्माका लागि भने यो तीज अझ विशेष रह्यो।
झन्डै ६ महिनाअघि वैवाहिक जीवनमा बाँधिएकी उनी पहिलोपटक व्रत बसेकी छन्। हाल माइत पुगेकी आँचललाई पानी नखाई व्रत बस्न रमाइलो लागिरहेको छ।
'पहिलोपटक घर र माइती छुट्टिएको महशुस गर्दैछु। अहिले माइतीमा दिदीबहिनीहरूसँग नाचगान चल्दैछ,' उनले भनिन्।
विवाहपछिको पहिलो तीज मनाउनेमा अभिनेत्री ऋचा शर्मा पनि पर्छिन्। उनी यतिबेला घरमै छिन्।
सासूआमासँग घरमै पूजामा व्यस्त रहेको उनी बताउँछिन्, 'बाहिरी माहोलमा नाचगानभन्दा यता घरमै बसेर पूजा गर्ने चलन रहेछ। ममी र म बिहानैबाट पूजामा व्यस्त छौं।'
ऋचा पनि पहिलोपटक तीजको व्रत बसेकी हुन्। उनी यसलाई धार्मिकभन्दा स्वास्थ्य दृष्टिले राम्रो मान्छिन्।
अभिनेत्री दिया मास्केलाई पनि तीज लागेको छ।
पोखराबाट काठमाडौं आएकी उनले शुक्रबार इन्स्टाग्राममा श्रीमान अनुप बरालको फोटो पोष्ट गर्दै लेखेकी छिन्, 'तिमी पोखरा, म काठमाडौं। यसपालिको तीज यसरी मनाइयो। सोचेझैं जिन्दगी रैनछ। तीजको चाड अर्को वर्ष धुमधाम र सँगै मनाउँला है।'
दिया यसपालिको तीज माइतीमा परिवारसँगै मनाउँदै छिन्। कोरोना महामारी र लकडाउनले सिर्जना गरेको त्रासपूर्ण अवस्थामा पनि पीडा भुलाउन परिवारका सदस्यसँग रमाइलो माहोल बनाउन खोजिरहेको दिया बताउँछिन्।
तीजमा पहिलोपटक व्रत बसेको अनुभवमा उनी भन्छिन्, 'धार्मिक दृष्टिले भन्दा इच्छाले व्रत बसेकी छु। व्रत बस्दा मानसिक रूपमा पनि फ्रेस हुने रहेछ।'
तीजमा महिलाले श्रीमानको लामो आयुका लागि व्रत बस्ने चलन छ। अविवाहित भए 'राम्रो श्रीमान पाऊँ' भन्दै व्रत बस्ने चलन पनि यथावत नै छ। तर यी परम्परा र चलनचल्ती विस्तारै परिवर्तन हुँदैछन्।
यस्तै परिवर्तनको उदाहरण बनेका छन्, गायक प्रमोद खरेल जो पत्नी र परिवारको सुस्वास्थ्यका लागि व्रत बसेका छन्।
प्रमोदको विवाह भएको १० वर्ष भयो। उनी व्रत बसेको भने पहिलोपटक हो।
भन्छन्, 'यसपटक तीजमा श्रीमती र परिवारका सदस्यको सुस्वास्थ्यका लागि व्रत बसेको हुँ। व्रतले ध्यान र साधनाका लागि पनि फाइदा गर्ने रहेछ।'
तीजको अवसरमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् खुसी आदान-प्रदान गर्ने कलाकारहरूमा निर्देशक एवं अभिनेत्री रेखा थापा पनि पर्छिन्।
शुक्रबारै जन्मदिन मनाइरहेकी उनी लेख्छिन्, 'तीजको अवसरमा सम्पूर्ण दिदी बहिनीहरूलाई शुभकामना। यसपालिको तीज सामूहिक रूपमा मनाउन नपाए पनि हामी सबैको आस्था र विश्वास कमजोर छैन। महामारीको यो समयमा सबैले सुरक्षित र सावधानी साथ तीज मनाउने छौं र अर्को साल हामी भव्य रूपमा एकसाथ तीज मनाउँला। सुस्वास्थ्यको कामना!'
नायिका करिश्मा मानन्धरले पनि यो वर्ष अप्ठ्यारो परिस्थितमा तीज मनाउनु परेको लेखेकी छन्।
फेसबुकमा उनले लेखेकी छन्, 'सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई हरितालिका तीजको मंगलमय शुभकामना! परिस्थितिले निश्चित परिधिभित्र बसेर मनाउनुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ, आफ्नो परिवारसँग रमाउनु होला। स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु होला।'
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ ५, २०७७, ०८:५८:००